को हुन त ‘दभ्याइस अफ नेपाल’ सिजन ३ का बिजेता किरण गजमेर?
ब्लाइन्ड अडिसन राउन्ड मा लै लै लै बाट नै खुशी देखिएका प्रमोद खरेल किरणले देखेर तिमीलाई, हेरेर तिमीलाई भन्दा सम्म जर्ज प्रमोद खरेल ले आफुले आइ वान्ट यु भनिसकेका थिए। यो गीतको रचयिता हर्क साउद हुन् भने संगीत सुजन चापागाईंको । यसमा चापागाईं स्वयं र विद्या तिवारीको स्वर छ । लकडाउनका वेला निकै नै चर्चित बनेको यो गीत गत साता ‘द‘भ्वाइस अफ नेपाल’मा पनि सुनियो । भ्वाइस अफ नेपालमा फरक स्वर र स्वादमा गुन्जिएपछि क्रमस जर्जहरु एक एक गर्दै सबैलाइ यो गीतले पुनः एकपटक जुर्मुराएको देखियो स्टेज। त्यही गित बाट छानिएका किरण गजमेर अन्ततः ‘द’भ्याइस अफ नेपालमा सिजन३ का बिजेता बने।बिजेता बनेर पाएको २५ लाख रुपैया जब उनले शरणार्थीको लागि एम्बुलेन्स किन्ने घोषणा गरे तब सबैले यिनको प्रसंशा गरे।
आखिर को हुन किरण गजमेर?
सन् १९९३ मा यिनका हजुरबा र हजुराआमा भुटानी शरणार्थी बनेर नेपाल आएका थिए।
शरणार्थी शिविरमै किरणका बाआमाको विवाह भयो । किरण यतै जन्मिए । किरण उनै हुन्, जो १० वर्षअघि सन् २०११ मा सपरिवार अमेरिका गएका थिए ।
अहिले त किरण अमेरिकाको बासिन्दा बनिसकेका छन् । बाल्यकाल भने नेपालमै बिताएका किरणको बाल्यकाल अत्यन्तै दुखमा बित्यो । बाँसको फक्ल्याँटोले बारेको घर, चुहिने छानोमा ओत लागेर सकियो उनको बाल्यकाल । त्यही बाल्यकालमै किरणले संगीतको सुर सिके । गलालाई तिक्खर बनाउने कोसिस गरे । ‘त्यसवेला हामीसँग केही थिएन, आफैँ सिक्थेँ, आफैँ गाउँथेँ,’ किरण सुनाउँछन् ।
उनले अमेरिका पुगेपछि महसुस गरे, धेरैले नेपाली भाषा बिर्सँदै छन् । संस्कृति, पोसाक बिर्सँदैछन् । उनीहरू आफ्नो पहिचानप्रति चासो राख्दैनन् । यसैले पनि आफूलाई नेपाली संगीतले तानिरहने बताउँछन् उनी अमेरिका पुगेको ११ वर्षपछि रियालिटी सोमा भिड्न नेपाल आए।
। भन्छन्, ‘मेरो उमेरका धेरै साथीहरूले नेपाली भाषा बिर्सिसकेका छन् । पछि आउने पुस्ताले त झनै बिर्सनेछ । त्यसैले, संगीतको माध्यमबाट आफूले सकेको कोसिस गरूँ, भाषा, संस्कृतिबारे अवगत गराऊँ भनेर संगीतमा लागेको हुँ ।’
नेपाल आएर पहिला झापा गए, जहाँ उनको बाल्यकाल बितेको थियो । तर, त्यहाँ त सबथोक परिवर्तन भइसकेको रहेछ । पहिला टुकीको उज्यालोमा पढ्थे, बत्ती आइसकेछ । बाँसको फक्ल्याँटोले बारेका घरहरू थिए, जस्तापाता आइसकेछ । माटोले लिपेको भुइँ थियो, सिमेन्टको कंक्रिट बनिसकेछ । किरण बसेको शिविर र घर भएको ठाउँ त जंगल बनिसकेछ । ‘अस्ति जाँदा मलाई घरै ठम्याउन गाह्रो भयो ।
भुटानबाट किरणको परिवारले केही लिएर आएको थिएन, जीउमा लगाएको कपडाबाहेक । भाग्दैभाग्दै आएका थिए । यतै आएर सानोतिनो टहरा ठडाए । पछि किरणको परिवार अमेरिका गयो, अरू शरणार्थीहरू पनि गए । बाँकी अझै शरणार्थी यतै छुटेका छन् । उनीहरू बाहिर जान पाउँदैनन् । न नेपालको नागरिकता छ । पहिला विविध संस्थाले रासन दिने गर्थे, अहिले आफैँ कमाएर खानुपर्ने बाध्यता रहेको किरणले यतै आएर थाहा पाए । ‘यस्तो अवस्था देख्दा एकदमै दुःख लाग्छ । आफ्नो भूमि छाडेर बाँच्नुपर्‍यो । अहिले न नागरिकता छ, न केही । त्यसरी नै धेरैवटा पुस्ता सकिँदै छ,’ किरण भन्छन् ।
विजेता भएका किरण गजमेर ‘द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन–३’का लागि नै अमेरिकाबाट नेपाल आएका थिए । भुटानी शरणार्थी उनी अमेरिका पुर्नस्थापित भएका थिए । एल्बमको तयारीमा रहेका उनी भन्छन्, ‘जे सुनेर हुर्कियो, त्यसैको चाह र आदत बस्नेरहेछ । त्यसैले मलाई संगीतले नै फेरि नेपाल ल्याइदियो। चर्चित रियालिटी शो ‘द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन–३’का विजेता पनि बने किरण गजमेर । दर्शकबाट सबैभन्दा बढी भोट पाएको आधारमा गजमेर ‘द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन–३’ घोषणा भएका हुन् । उनी टिम प्रमोद खरेलबाट विजयी भएका छन् ।